Ireo mpikaroka momba ny fiarovana amin'ny fifamoivoizana kanadiana handeha ho any Iran
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Ireo mpikaroka momba ny fiarovana amin'ny fifamoivoizana kanadiana handeha ho any Iran
Janoary 12, 2020
The Birao fiarovana ny fitaterana an'ny Kanada (TSB) dia nahazo visa ho an'ireo mpanao famotorana roa handehanany any Repoblika Islamika ao Iran. Handeha izy ireo vorontsiloza ho an'ny Tehran amin'ny Alatsinainy 13 Janoary, miaraka amin'ireo mpikambana ao amin'ny ekipa consular kanadiana.
Ny TSB koa dia hametraka ekipa mpanao famotopotorana faharoa izay manampahaizana manokana amin'ny fampidinana sy ny fandalinana an-tsoratra ny fiaramanidina raha vao manamafy ny toerana sy ny fotoana hanaovana io asa io isika.
Ny TSB dia masoivoho mahaleo tena iray izay manadihady ny fisian'ny rivotra, an-dranomasina, ny fantson-drano ary ny fitaterana an-dalamby Ny tanjony tokana dia ny fampiroboroboana ny fiarovana ny fitaterana. Tsy andraikitry ny Birao ny manome andraikitra diso na mamaritra ny adidy sivily na ny heloka bevava.
eTurboNews efa nitatitra momba an'i Canada izay mitarika amin'ny fanadihadiana manerantany.
Tsy miato avy any Düsseldorf mankany Karaiba sy Mexico